Nhau - Muna 2020, nyika yapinda muhondo huru yekurwisa COVID-19
Muna 2020, nyika yapinda muhondo huru yekurwisa COVID-19. Hondo iyi yakareba kudarika zvaitarisirwa. Muna Gumiguru, ZVAKANAKA zvakaparura hutachiona hutsva uye mishonga yekudzivirira mabhakitiriya.
Iyi F & U inoraswa mishonga inouraya utachiona ine mukomboni-cheni yechetatu yemamonium munyu mushonga unouraya utachiona. Rudzi urwu rwehutachiona hune hutachiona hwakanakisa hwekuita. Pakati pavo, pane quaternary ammonium munyu zvemukati zviri 0.18-0.22.
Nei quaternary ammonium munyu iri mukati me0.88% -0.22%?
Izvi zvirimo quaternary ammonium munyu haigone chete kutapudza uye kuisa utachiona, asi zvakare haina kutsamwa. Kana iko kusungirirwa kuri pakati pe0.88% uye 0,22%, inogona kuburitsa ventricular barrier mhedzisiro, zvichikonzera kukura kwebhakitiriya nemavhairasi kudzivirirwa uye kufa.
Kunyanya kumabhakitiriya mazhinji senge Staphylococcus aureus, Candida albicans, Escherichia coli, nezvimwe, kushandisa "pepa" chanza kunogona kukurumidza kumisa mabhakitiriya nemavhairasi.
Zvinoenderana nekuyedzwa nemasangano ane chiremera, mwero wayo wekudzivirira mbichana wasvika 99.9%.
Kunyangwe nyanzvi dzichiti kugeza maoko nguva zhinji, zvinodikanwa kuti uite basa rakanaka rekudzivirira hutachiona uye kusauraya mawoko. Ehezve, kungochenesa nemvura yepombi hakugeze mabhakitiriya ari mumaoko.
Kunyangwe doro riinewo simba rekudzivirira uye kusauraya utachiona, kushanda kusiri iko kunogona kubata moto. Uye doro harina hushamwari paganda redu.
Nezvinoraswa zvinouraya utachiona, unogona kuishandisa kupukuta maoko ako chero nguva, sterilize uye disinfect, uye kuramba hutachiona hutachiona.
Kune vamwe vana vanoita misikanzwa vanowanzo svibisa maoko avo. Uye chishandise kupukuta sterilization uye disinfection hazvigone kuve nani, chinotariswa chakapfava zvinyoro uye zvine hushamwari kune ganda.
Iyi FU inouraya utachiona inogadzirwa nemachira epamusoro-soro asina kurukwa, ayo anobata zvinyoro-nyoro ganda pasina kutsamwa kana kusagadzikana.
Midziyo irimo mufomula iri mukuteerera zvizere nemashandisirwo eEuropean Union, uye nyaya dzekuchengetedza pamwe nehutano zvinovimbiswa.
Iyi nyoro yekupukuta ine zvakasiyana siyana zvinonhuwira senge ndimu, grapefruit, aloe, lavender zvichingodaro. Isu tinopawo mhando nyowani dzakagadziriswa masevhisi. Tinokugamuchirai kuti mutaure nesu pamwe.